Mon-State-School-Project | Youth Society for Education
(Please find the English translated version below.)
(Zawgyi Font Version ကိုအောက်တွင်ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။)
မှနျပွညျနယျ၊ ရေးမွို့နယျ၊ ခေါဇာမွို့၊ မာနျအောငျကြေးရှာတှငျ တညျရှိသော အခွခေံပညာအလယျတနျးကြောငျး(ခှဲ)တှငျ ကြောငျးဆောငျသဈတိုးခြဲ့ဆောကျလုပျရနျ အရေးတကွီးလိုအပျလကျြရှိပါသညျ။ အဆိုပါကြောငျး၌ ကြောငျးသားဦးရေ ၂၉၇ဦးအတှကျ လကျရှိအသုံးပွုနသေောကြောငျးဆောငျမှာ ပွညျနယျအစိုးရမှ နထေိုငျရနျမသငျ့သော အန်တရာယျရှိအဆောကျအဦး အဖွဈသတျမှတျခံထားရသညျ့ ကြောငျးဆောငျဖွဈပွီး ကြောငျးဆောငျအသဈဆောကျလုပျရနျ ငှကွေေးမတတျနိုငျသညျ့အတှကျကွောငျ့သာ ထိုအန်တရာယျရှိအဆောကျအဦးကို ဆကျလကျအသုံးပွုနရေလကျြရှိပါသညျ။
မာနျအောငျကြေးရှာ အလယျတနျးကြောငျးရှိ ကလေးငယျမြားနှငျ့ ဆရာဆရာမမြားအားလုံး ဘေးအန်တရာယျကငျးကငျးနှငျ့ လုံခွုံစိတျခစြှာပညာသငျကွားနိုငျရနျအတှကျ Youth Society for Education မှ အလြားပေ ၁၂၀ x အနံ ၂၄ ပေ အကယျြအဝနျးရှိ လေးခနျးတှဲစာသငျကြောငျးဆောငျတဈခု ဆောကျလုပျလှူဒါနျးနိုငျရနျ ကွိုးစားအကောငျအထညျဖျောလကျြရှိပါသညျ။
ကြောငျးဆောငျအသဈဆောကျလုပျရေးအတှကျ ခနျ့မှနျးခွစေုစုပေါငျး သိနျး ၃၅၀ ခနျ့ကုနျကမြညျဖွဈရာ စာသငျကြောငျးဆောငျအသဈအောငျမွငျစှာပွီးမွောကျရေးအတှကျ စတေနာရှငျ လူကွီးမိဘ၊ မိတျဆှသေူငယျခငျြးအပေါငျးတို့အား အလှူဒါနအနညျးအမြားမဆို ပါဝငျကူညီလှူဒါနျးကွပါရနျ Youth Society for Education လူငယျပရဟိတအဖှဲ့အစညျးမှ လေးစားစှာဖိတျချေါအပျပါသညျ။
ကြောငျးဆောငျဆောကျလုပျပွီးစီးရနျခနျ့မှနျးကွာခြိနျ။ ။ဖဖေျောဝါရီလ၊ ၂၀၂၀ ခုနှဈ - ဇှနျလကုနျ၊၂၀၂၀ ခုနှဈ။
ကြောငျးဆောငျအကယျြအဝနျး။ ။ အလြားပေ ၁၂၀ x အနံ ၂၄ ပေ
ခနျ့မှနျးကုနျကစြရိတျ။ ။ ကပျြသိနျး ၃၅၀
ကြောငျးဆောငျအသဈဆောကျလုပျရေးအတှကျကူညီပါဝငျလှူဒါနျးလိုပါက အောကျပါ Donate Button မှလညျးကောငျး၊ Zelle ® မှတဈဆငျ့ yseadmin@ysenpo.org သို့လညျးကောငျး ပေးပို့လှူဒါနျးနိုငျပါသညျ။ ကြောငျးဆောငျဆောကျလုပျရေးနှငျ့လှူဒါနျးမှုအတှကျ မေးမွနျးစုံစမျးလိုပါက ဖုနျး +1-650-443-8925, akayithein@ysenpo.org (မဧကရီသိနျး) သို့ဆကျသှယျမေးမွနျးနိုငျပါသညျ။
မှတျခကျြ။ ။Youth Society for Education ပရဟိတအဖှဲ့အစညျးသညျ အမရေိကနျနိုငျငံအခွစေိုကျ၊ Federal အစိုးရအသိအမှတျပွုထားသညျ့ အခှနျကငျးလှတျခှငျ့ရသော 501(c)(3) အဖှဲ့အစညျးဖွဈပါသောကွောငျ့ လှူဒါနျးငှပေမာဏအလြောကျ အမရေိကနျနိုငျငံဥပဒအေရ အခှနျသကျသာစရိတျရရှိနိုငျပါသညျ။
A middle school in Man-Aung village, Myanmar, is in dire need ofanew school facility. The local government has deemed the current school facility, which currently accommodates 297 students, to be “unsafe.” However, due to limited funding and resources, local people continue to utilize the dangerous building for schooling purposes.
Youth Society for Education (YSE) aims to remedy this situation by donatingaschool facility, with an estimated baseline cost of 35,000,000 MMK (approximately $25,000 US$). With an area of 120x24 square feet, the new school building including four classrooms will provideasafe learning environment that the students and teachers from Basic Education Middle School (Branch) deserve.
To begin the construction by February 2020, however, we would need your help. Our YSE family humbly invites you to join our mission in securingasafe learning space for these deserving young children and teachers. Your contribution will definitely makeadifference in their lives. Let us projectabetter future for them, together.
Estimated Project Timeline: February 2020 - June 2020
School Building’s Dimensions: 120 x 24 square feet
Estimated Baseline Cost: 35,000,000 MMK (approximately $25,000 US$)
Construction Company: Kyal Sin Thiha Construction
We accept your kind donation via the Donate Button below as well as via Zelle ® at yseadmin@ysenpo.org. Should you have any questions regarding the School Building Project, please contact Akayi Thein (Sophie Tan) at 650-443-8925 or akayithein@ysenpo.org.
P.S. Youth Society for Education isaqualified 501(c)(3) tax-exempt organization, and donations are tax-deductible to the full extent of the law within the United States.
မွန်ပြည်နယ်၊ ရေးမြို့နယ်၊ ခေါဇာမြို့၊၊ မာန်အောင်ကျေးရွာတွင် တည်ရှိသော အခြေခံပညာအလယ်တန်းကျောင်း(ခွဲ)တွင် ကျောင်းဆောင်သစ်တိုးချဲ့ဆောက်လုပ်ရန် အရေးတကြီးလိုအပ်လျက်ရှိပါသည်။ အဆိုပါကျောင်း၌ ကျောင်းသားဦးရေ ၂၉၇ဦးအတွက် လက်ရှိအသုံးပြုနေသောကျောင်းဆောင်မှာ ပြည်နယ်အစိုးရမှ နေထိုင်ရန်မသင့်သော အန္တရာယ်ရှိအဆောက်အဦး အဖြစ်သတ်မှတ်ခံထားရသည့် ကျောင်းဆောင်ဖြစ်ပြီး ကျောင်းဆောင်အသစ်ဆောက်လုပ်ရန် ငွေကြေးမတတ်နိုင်သည့်အတွက်ကြောင့်သာ ထိုအန္တရာယ်ရှိအဆောက်အဦးကို ဆက်လက်အသုံးပြုနေရလျက်ရှိပါသည်။
မာန်အောင်ကျေးရွာ အလယ်တန်းကျောင်းရှိ ကလေးငယ်များနှင့် ဆရာဆရာမများအားလုံး ဘေးအန္တရာယ်ကင်းကင်းနှင့် လုံခြုံစိတ်ချစွာပညာသင်ကြားနိုင်ရန်အတွက် Youth Society for Education မှ အလျားပေ ၁၂၀ x အနံ ၂၄ ပေ အကျယ်အ၀န်းရှိ လေးခန်းတွဲစာသင်ကျောင်းဆောင်တစ်ခု ဆောက်လုပ်လှူဒါန်းနိုင်ရန် ကြိုးစားအကောင်အထည်ဖော်လျက်ရှိပါသည်။
ကျောင်းဆောင်အသစ်ဆောက်လုပ်ရေးအတွက် ခန့်မှန်းခြေစုစုပေါင်း သိန်း ၃၅၀ ခန့်ကုန်ကျမည်ဖြစ်ရာ စာသင်ကျောင်းဆောင်အသစ်အောင်မြင်စွာပြီးမြောက်ရေးအတွက် စေတနာရှင် လူကြီးမိဘ၊ မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းအပေါင်းတို့အား အလှူဒါနအနည်းအများမဆို ပါဝင်ကူညီလှူဒါန်းကြပါရန် Youth Society for Education လူငယ်ပရဟိတအဖွဲ့အစည်းမှ လေးစားစွာဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်။
ကျောင်းဆောင်ဆောက်လုပ်ပြီးစီးရန်ခန့်မှန်းကြာချိန်။ ။ဖေဖော်ဝါရီလ၊ ၂၀၂၀ ခုနှစ် - ဇွန်လကုန်၊၂၀၂၀ ခုနှစ်။
ကျောင်းဆောင်အကျယ်အ၀န်း။ ။ အလျားပေ ၁၂၀ x အနံ ၂၄ ပေ
ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်။ ။ ကျပ်သိန်း ၃၅၀
ကျောင်းဆောင်အသစ်ဆောက်လုပ်ရေးအတွက်ကူညီပါဝင်လှူဒါန်းလိုပါက အောက်ပါ Donate Button မှလည်းကောင်း၊ Zelle ® မှတစ်ဆင့် yseadmin@ysenpo.org သို့လည်းကောင်း ပေးပို့ လှူဒါန်းနိုင်ပါသည်။ ကျောင်းဆောင်ဆောက်လုပ်ရေးနှင့်လှူဒါန်းမှုအတွက် မေးမြန်းစုံစမ်းလိုပါက ဖုန်း +1-650-443-8925, akayithein@ysenpo.org (မဧကရီသိန်း) သို့ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
မှတ်ချက်။ ။Youth Society for Education ပရဟိတအဖွဲ့အစည်းသည် အမေရိကန်နိုင်ငံအခြေစိုက်၊ Federal အစိုးရအသိအမှတ်ပြုထားသည့် အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်ရသော 501(c)(3) အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပါသောကြောင့် လှူဒါန်းငွေပမာဏအလျောက် အမေရိကန်နိုင်ငံဥပဒေအရ အခွန်သက်သာစရိတ်ရရှိနိုင်ပါသည်။